Ny Bhuka's Drukair dia nisafidy ny A320neo
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Bhutan » Ny Drukair an'i Bhutan dia misafidy ny A320neo
Ny Drukair an'i Bhutan dia misafidy ny A320neo
Aprily 20, 2018
Drukair, mpitatitra saina an'ny Fanjakan'i Himalaya Atsinanana any Bhutan, dia nanao sonia fifanarahana fividianana A320neo iray hanohanana ny drafitra fitomboany ary hamenoana ireo fiaramanidina misy azy ireo misy A319 telo. Ny fiaramanidina dia ampandehanin'ny motera CFM Leap-1A26E1 nohatsaraina ho an'ny asa avo lenta ary ho lasa fiaramanidina lehibe indrindra miasa ivelan'ny tobin'i Drukair ao Paro.
Paro, eo amin'ny haavon'ny 7,300 320 metatra sy voahodidin'ny tendrombohitra avo, no iray amin'ireo seranam-piaramanidina sarotra indrindra eran'izao tontolo izao. Noho ny zava-bitan'ny AXNUMXneo tsy manam-paharoa dia ho lasa fiaramanidina lehibe indrindra hiasa avy any Paro izy io izay manome fahaiza-mandoa bebe kokoa sy haavo fampiononana avo indrindra an'ny mpandeha noho ny vokatra hafa.
Manasongadina lamina roa amin'ny kabinetra misy kilasy roa, haparitaka ny fiaramanidina hampitomboana ny fahafaha-manao amin'ireo zotram-paritra misy any Singapore, Bangkok, Kathmandu, Delhi ary, Calcutta.
Ny A320neo Family dia mampiditra ireo haitao farany indrindra ao anatin'izany ny motera vaovao sy ny Sharklets izay miaraka manangona tahiry solika 15 isan-jato farafaharatsiny ary 20 isan-jato amin'ny taona 2020. ny tsena.
Ireo mpitantana orinasa israeliana dia nikasa hiresaka forum momba ny fizahan-tany ao Tanzania
Ny Birao Nasionaly Mpizahatany Nasionaly dia mampiroborobo ny 'Destination Germany' ao amin'ny ATM Dubai
46 minitra lasa izay